Mbido Kpọtụrụ Page
Iru anyị site na dejupụta kọntaktị mpempe n'okpuru
LifeBogger bụ Plato bọọlụ na-ewetara akụkọ banyere Untold Biography Eziokwu na Akụkọ banyere Stars Stars. Anyị nwere mmasị na football dị ka egwuregwu. Ọ bụ ya mere anyị ji lekwasị anya na Akụkọ Akụkọ Footballgba Egwuregwu Na-enweghị Atụ.
Zitere anyị ozi!
** A ga-echekwa data ị nyefere bụ ma a gaghị ere ma ọ bụ kesaa ya na ndị ọzọ **
Akụkọ ndụ anyị Sandro Tonali na-agwa gị eziokwu gbasara akụkọ nwata ya, ndụ mbụ, nne na nna (Mariarosa na Giandomenico), Ezinụlọ, Nwanna (Enrico), nwanne (Matilde). Ọzọkwa, Lifebogger na -ekpughere ...